emaphaketheni ecacile, ecacile plastic emabhokisini ibhokisi plastic ecacile, amabhokisi plastic
HLP Klearfold yilona elihamba phambili ekukhiqizeni emhlabeni elikhulu amabhokisi plastic ecacile , umhlinzeki ehamba phambili ngokwezifiso thermoforming futhi amashubhu plastic ecacile kanye nezinhlamvu , kanye unjiniyela ecacile emaphaketheni emisha njenge- Klearfold ® Keeperfuthi Insight ® emaphaketheni izinhlelo, futhi Duofold ® inhlanganisela emaphaketheni. Siqasha ukunyatheliswa eziphambili kakhulu, ubuciko, kanye nobuchwepheshe kokuguqula. Nokuphathelene yethu Soft crease ® amagoli ubuchwepheshe kuqinisekisa ukuthi Klearfold ® amabhokisi plastic ecacile usethe ngokushesha futhi kalula kuzo zombili esandleni futhi umshini-ukugcwalisa izicelo.
Sizimisele ukuhlinzeka amazinga aphezulu kwamakhasimende, futhi sakhonza ecacile plastic ibhokisi izidingo emakethe North American for engaphezu kwengu-15. Sesakhe okuthembekile, ingqalasizinda ephumelela kakhulu, futhi wazibonela North yokuthengisa kanye nokuphathwa amaqembu American. Abesekayo wethu ozinikele ukuhlinzeka angu-24 ukunakekela amakhasimende, futhi sizama ukuletha: Plastic ibhokisi izingcaphuno emahoreni angu-24 CAD amasampula ezinsukwini ezintathu kuya kweziyisihlanu Umbala ogcwele plastic ibhokisi comps kungakapheli isonto elilodwa kokuthola umsebenzi wobuciko Ukudiliva eNyakatho Melika ngo-eziyisithupha kuya amasonto eziyisishiyagalombili ibhokisi plastic isampula ukwamukelwa
Singabantu ISO 9001 eqinisekisiwe kanye Sedex ® ilungu. Sisebenza kanzima ukuze sithole wonke amazinga global ukuhambisana nomphakathi, futhi sikhuthaza amakhasimende ukuvakashela futhi enze izinga yabo futhi ukubalwa kwezimali ukuhambisana nomphakathi. Siphinde futhi sibe ilungu Customs-Trade Ukubambisana Nokulwa Ubuphekula (C-TPAT), uhlelo supply chain nokuvikeleka yokuzithandela eholwa US Customs and Border Ukuvikelwa, wagxila ekwenzeni ngcono ukuphepha izinkampani eziyimfihlo 'ukunikezela ngamaketanga.